UYesu ethetha nabanye babapostile bakhe kwiNtaba Yeminquma | Isigidimi SeBhayibhile
UYesu uchaza izinto eziza kuphawula ubukho bakhe esemandleni obukumkani nokupheliswa kwale nkqubo yezinto
KWINTABA yeMinquma, apho ibonakala kakuhle iYerusalem netempile yayo esemazantsi, abafundi abane bakaYesu bambuza ngoko ebekuthetha ngaphambilana. UYesu usandul’ ukuthi itempile yaseYerusalem iza kutshatyalaliswa. Kwaye ngaphambilana, uye wabaxelela ‘ngokupheliswa kwenkqubo yezinto.’ (Mateyu 13:40, 49) Ngoku abapostile bayambuza: “Uya kuba yintoni na umqondiso wobukho bakho nowokupheliswa kwenkqubo yezinto?”—Mateyu 24:3.
UYesu wabaxelela ngezinto ezaziza kwenzeka ngaphambi kokuba iYerusalem itshatyalaliswe. Kodwa wayengathethi ngokutshatyalaliswa kweYerusalem nje kuphela. Kamva isiprofeto sakhe sasiza kuzaliseka kwihlabathi lonke. UYesu waprofeta ngomqondiso weziganeko ezaziza kwenzeka ngaxeshanye emhlabeni. Loo mqondiso wawuza kunceda abo basemhlabeni baqonde ukuba uYesu sele eqalisile ukulawula njengoKumkani ezulwini. Ngamany’ amazwi, lo mqondiso wawuza kubonisa ukuba uYehova uThixo umisele uYesu njengoKumkani woBukumkani obuthenjisiweyo bukaMesiya. Wawuza kubonisa ukuba uBukumkani sele buza kuphelisa ubungendawo buze buzise uxolo lokwenyaniso eluntwini. Ngaloo ndlela izinto awaprofeta ngazo uYesu zaziya kuphawula imihla yokugqibela yale nkqubo indala yezinto—izinto ezenzeka elunqulweni, kwezopolitiko nakwezentlalo—nokuqalisa kwenkqubo entsha.
Echaza oko kwakuza kwenzeka emhlabeni ngexesha lobukho bakhe elawula njengoKumkani ezulwini, uYesu wathi kwakuya kubakho iimfazwe, ukunqongophala kokutya, iinyikima ezinkulu, nokusasazeka kwezifo ehlabathini lonke. Kwakuza kwanda ukuchasa umthetho. Abafundi bakhe bokwenene babeza kushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo ehlabathini lonke. Zonke ezi zinto zaziza kufikelela incopho ‘kwimbandezelo enkulu’ engazange ibekho ngaphambili.—Mateyu 24:21.
Abalandeli bakaYesu babeza kwazi njani ukuba ikufuphi loo mbandezelo? UYesu wathi: “Fundani kuwo umkhiwane.” (Mateyu 24:32) Xa umkhiwane uvelisa amagqabi, siyazi ukuba ihlobo likufuphi. Ngokufanayo, ukwenzeka ngaxeshanye kwazo zonke izinto ezachazwa nguYesu kwakuya kuba ngumqondiso wokuba isiphelo sikufuphi. NguBawo kuphela owaziyo umhla nelixa eza kufika ngalo imbandezelo enkulu. Ngoko uYesu wabongoza abafundi bakhe wathi: “Hlalani niphaphile, kuba anazi ukuba ixesha elimisiweyo linini na.”—Marko 13:33.
—Oku kusekelwe kuMateyu isahluko 24 nesama-25; kuMarko isahluko 13; kuLuka isahluko 21.
Yintoni ababefuna ukuyazi ngakumbi abafundi bakaYesu?
Wawuthetha ntoni umqondiso owachazwa nguYesu, yaye sasiza kuwubona ngantoni?
UYesu wabaluleka wathini abalandeli bakhe?
UMQONDISO WOBUKHO BUKAKRISTU
UYesu waxela kwangaphambili ukuba kuza kubakho umqondiso obonisa ukuba sele lisondele ixesha lokuba uThixo ayitshabalalise le nkqubo yezinto yonakeleyo. Ukususela kwiMfazwe Yehlabathi I, abantu baye bakubona ukuzaliseka kweso siprofeto sikaYesu. Izinto ezenzeka ehlabathini kwezonqulo, kwezopolitiko nakwezentlalo zikhawulezela kwisiphelo esingenakuphepheka sale nkqubo yezinto. UYesu wafundisa abafundi bakhe ukuba, ukuze basinde, babemele ‘bahlale bephaphile,’ baze bame ngakwicala likaThixo kwimbambano yolongamo. *—Luka 21:36; Mateyu 24:3-14.
^ isiqe. 14 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngesiprofeto sikaYesu, funda isahluko 9 kwincwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.